Mihidy ny fanerena China makarakara sy ny orinasa mpanamboatra | Hongchang
Mihidy Pressure makarakara
Port: Yantai na Qingdao
Mihidy fanerena vokarina makarakara dia mampiasa ny fanerena mba hanidy hydraulic notched miara-bara. Manome fanohanana sy tsara lateral manana madio, malama fijery. Tsy afaka manohana ny lanjan'ny Rolling entana.
Fampiharana ny vy makarakara
Ny fahamboniana, ny fampiharana an-tsaha sy ny fampiharana ny vy makarakara
Fampitahana amin'ny Nalaza lovia, vy gratings manana ireto tombony: mazava lanjany, avo hery, be entana-mitondra fahafahana, satria ara-toekarena ny fitaovana, rivotra sy ny hazavana fieken-keloka, maoderina lamaody sy ny tsy-taratasy kely sy sy azo antoka, mora ny fanadiovana sy ny fametrahana, satria matanjaka sy mateza, sns.
Vy makarakara no be mpampiasa ao amin'ny: herinaratra, simika zavamaniry, orinasa mpanadio solitany, vy sy asa vy, taratasy Mil, milina trano orinasa, simenitra mils, monisipaly injeniera, maloto fitsaboana, fitsaboana zavamaniry sy foodstuff orinasa.
vy makarakara fitsipika
Hot-mandroboka galvanizing dia endriky ny galvanization.It dia ny dingan'ny coating vy makarakara amin'ny manify ny zinc sosona, amin'ny alalan'ny fizarana ny vy amin'ny alalan'ny fandroana an-idina ny fanitso midika coating hatevin'ny dia 70 μ M rehefa miainga amin'ny bara vy 3mm ny 5mm amin'ny hateviny.
Fonosana ny vy makarakara
Panels dia fonosana amin'ny fomba tsara indrindra ny tahony, amin'ny alalan'ny fork-Lift na ny vanobe koa samy tady: roa toradroa lumbers no apetraka eo an-tampon'ny sy ambany ny fonosana tsirairay avy. Enina na lava efatra horonan ny M8 na M10 miditra amin'ny alalan'ny varavaran'ny ny gratings sy hamehezany ny kobany up.For ny vy 3mm gratings ny aizim-jaza bara, zoro efatra farantsa vy dia nanampy eo ambany hazo kianja sy ny tontonana, mba tsy avy deformation rehefa hoisting.Besides, famonosana manokana fitsipika toy ny mpanjifa ihany koa ny fepetra misy.
Fametrahana ny vy makarakara
Fa fametrahana, fastening roa ny fomba azo ampiasaina, na mampiasa ny lasely welding horonantsary, fa maharitra sy ny tsy fametrahana Nesorin'i, ny vy gratings dia Tack-welded ho fanohanana vy. Ary ny amin'ny toerana ho an'ny welding dia jereo ilay tetika eto ambany ity, amin'ny zorony efatra tontonana, ny voalohany mitondra fisotroana dia Tack-welded ny fanohanana mpikambana ao amin'ny 3mm min filet Weld x20r min ela. Lasely rakitsary, izay toy izany tombony tsy nandrava ny zinc arintany sy mora hanala, misy. Ny rafitra tsirairay dia mampiasa ny lasely efatra, fara fahakeliny, ny lehibe kokoa horonantsary Fa kobany kokoa rakitsary vitsivitsy kokoa no ampiasaina mba hanamboarana ny misy fanohanana mpikambana. Rehefa nifidy ny lasely horonantsary, azafady jereo manaraka latabatra.
Previous: Pressure welded makarakara
Aluminum Platform makarakara
Bar karazana Steel makarakara
Building Material Steel makarakara
Catwalk Platform makarakara
Catwalk Steel makarakara
Clips Fa Steel makarakara
Natambatra Steel makarakara
Composite Steel makarakara Platform
Pressure Weld iombonana amin'ny makarakara Steel
Steel iombonana amin'ny makarakara
Steel iombonana amin'ny makarakara Amin'ny Nalaza Steel Plate
Steel iombonana amin'ny Gratings samy hafa Sizes
Mikitroka Steel makarakara
Noforonina Steel Gratings
Floor Steel makarakara
Nandrisika Bar karazana Steel makarakara
Nandrisika Catwalk Steel makarakara
Nandrisika iombonana amin'ny makarakara Steel
Nandrisika Steel makarakara Panel
Nandrisika Steel makarakara Standard Size
Nandrisika Steel makarakara Weight
Heavy Adidy Steel Floor makarakara
Heavy Adidy Walkway Steel makarakara
Heavy-Duty Press-Locked Steel makarakara
Heavy-Duty welded Bar makarakara
Hot Dip nandrisika iombonana Steel makarakara
Hot nandrisika Steel makarakara
I Soraty Steel makarakara
Steel makarakara tsy ara-dalàna
Mihidy Steel makarakara
Low Carbon Serrated Steel makarakara
Metal Bar makarakara
Fahalemem Steel Bar makarakara
Sehatra Floor nandrisika Steel makarakara
Pressure Weld Steel makarakara
PVC makarakara vy mifono
Boribory Steel makarakara
Serrated nandrisika Steel makarakara
Serrated makarakara Platform
Serrated Press-Locked Steel makarakara
Serrated Steel makarakara Catwalk
Serrated Type Steel makarakara
Endrika Bar makarakara Round Metal makarakara
Faladiany Welding Steel makarakara
Stainless Steel Bar makarakara Decking
Stainless Steel Floor makarakara
Stainless Steel makarakara
Steel lalana mivily Grates Steel makarakara
Steel Floor Platform makarakara
Steel makarakara Clip
Steel makarakara Ejipta
Steel makarakara Fefy
Vy makarakara Fa drainage Pit hita ao
Steel makarakara Fa lalamby
Steel makarakara Houston
Steel makarakara Plant
Steel makarakara Plateform
Steel makarakara Platform
Steel makarakara Platform makarakara Dingana
Steel makarakara Size
Steel makarakara Walkway
Steel makarakara Weight
Vy makarakara Welding Machine
Vy makarakara Structure Platform
Walkway Metal Bar makarakara
Walkway Steel makarakara
Mandany Water Treatment Plant Platform makarakara
Welded Stair manosihosy Steel makarakara Amin'ny Checker Plate Nosing
Welded Steel Bar makarakara, Korea Steel makarakara